Igbo, John: Lesson 023 - Mkpa maka omumu ohuru (Jọn 3:1-13) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 023 (Need for a new birth)
b) Mkpa maka omumu ohuru (Jọn 3:1-13)
6 Ihe amuworo site n'anu-aru bu anu aru. Ihe amuru site na Mo Nso bu mo. 7 Ka ọ ghara iju gi anya na M'siri gi, Aghaghi imu unu ọzọ. 8 Ifufe nēfe ebe ọ nāchọ, i nānu kwa olu-ya, ma ọ mataghi ebe o si bia, na ebe ọ nāga. Otú a ka onye ọ bula nke amuworo site na Mọ Nsọ di.
Jizọs gosipụtara Nikọdimọs mkpa ọ dị mgbanwe mgbanwe na onye ọ bụla. Ngbanwe dị oke dị ka ọdịiche dị n'etiti anụ na mmụọ. Okwu a bu "anu aru" nime agba ohu negosi odidi mmadu dara ada nke ewezugara onwe ya n'ebe Chineke no, ndi ajo omume neme ka odi n'iru. Okwu ahu abughi nani aru, kama uche na mmuo nke ndi nnupu isi. Nke a bụ ọnọdụ nrụrụ aka zuru oke, dịka Jizọs kwupụtara, " Site n'obi ka echiche ọjọọ. "Odigh onye obula kwesiri ibanye n'ala eze Chineke. Madu bu onye ojo site na omumu, ya mere obu ihe ojo.
"Mo" nebe Mo Nso, Chineke n'onwe ya, juputara n'eziokwu, idi ocha, ike na ihu n'anya. Chineke adighi eleghara ndi ajo omume anya, kama o meriri ozizi nke anu aru nime Kraist. Nke a na-egosi ebumnuche nke ọmụmụ nke abụọ. Mmụọ nke dị nime anyị na-ebibi agụụ anụ ahụ, ka anyị wee dịrị ndụ ruo n'òkù anyị. A na-amụ gị ọzọ, a napụtara gị pụọ n'ọchịchị nke anụ ahụ?
N'oge nke atọ, Jizọs ji nwayọọ gwa Nikọdimọs okwu, sị, "Gị na ndị niile nọ na Kansụl gị, a ghaghị ịmụgha mkpụrụ nke Abraham ọzọ." Nke ahụ bụ otu ọrụ, ọrụ dị nsọ. Anyị na-agba akaebe gị, nwanna nwoke, na okwu a nke Kraist kwuru, "aghaghị" dị mkpa. Enweghi ike imeghari ohuru, i pugh imata Chineke ma ogaghi abanye n'Alaeze ya.
Ị nụtụwo ikuku nke ifufe? Ịlọghachi dị ka ifufe nke na-ebili. O yiri ka ifufe ọ na-abịa site na ya ma laghachi na ya. Ya mere, amuwo umu Chineke site n'elu ma laghachikuru Nna ha. Olu nke ifufe na-egosi na ọ dị n'ebe ahụ.
Ihe omuma doro anya n'ime ndi mmadu bu ndi amugharia bu olu nke Mo Nso site na ha. Anyị anaghị ekwu okwu site na olu nke ndị ikom na-esi n'echiche. Mmụọ Nsọ na-abịakwute anyị site na ụwa a, dị ka olu nke ike Chineke n'ime onye kwere ekwe. Ọ rịdatawo n'obi gị?
9 Nikọdimọs zara Ya, si, Ìhe ndia si aṅa pu ime? 10 Jisus zara ya, si, Gì onwe-gi bu onye-ozizí Israel, ma i maghi ihe ndia? N'ezie, n'ezie, asim i, Ayi nēkwu ihe ayi matara, ayi nāb͕a kwa àmà ihe ayi huru, ma unu anaraghi àmà-ayi. 12 Ọ buru na agwaram unu ihe nke uwa, ma unu ekweghi, ùnu gēsi aṅa kwere ma ọ buru na agwam unu ihe nke elu-igwe? 13 Ọ dighi onye ọ bula rigoworo n'elu-igwe, ma-ọbughi Onye siri n'elu-igwe ridata, bú Nwa nke madu, Onye nọ n'elu-igwe.
Na nkowa Kraist, Nikọdimọs nwere mmetụ nke Mmụọ Nsọ.Obi ya zaghachiri na mma nke Chineke. Ma uche ya aghọtaghị, ọ ghọtaghịkwa eziokwu ahụ n'ime omimi ya. Ọ tamuru ntamu, sị, "Amaghị m otú a ga-esi mụọ nwa ahụ." Nkwupụta nke bụ nkwenye nke ọdịda. Jisos gara n'ihu na-enye nduzi, "Ee, ị bụ onye nkụzi a na-akwanyere ùgwù, ị bịakwutewo m, ebe ndị ọzọ chere na ha dị elu na karịa karịa ka mụ na ha kparịta ụka, ị na-eme ha mma, ma ọbụna na ị maghị ebumnuche nke Mmụọ Nsọ, ihe niile ị na-efe na onyinye na mgbalị ị na-eme idebe Iwu ahụ bụ n'efu.
Oge nke atọ Jisos kwuru okwu dị mkpa, "N'ezie, n'ezie, ana m asị gị." N'okwu ọ bụla site na nkebi okwu a, Jizọs kwupụtara ọkwa ọhụrụ. Nke a bụ n'ihi na uche mmadụ anyị adịghị aghọta.Gịnị bụ ọhụụ ọhụrụ Nikọdimọs na-amụta? Kraist we si na okwu a bu "I" wezuga otutu "ayi"; nke a na-etinye onwe ya na olu nke Mmụọ. Kraist bu otu na Chineke na okwu ya incarnate. Jizọs na-akụzi eziokwu na ọ bụghị mmadụ niile na-aghọta. Ọ na-agba akaebe banyere ihe ndị ọ na-ahụ na mmekọrita ya na Mmụọ, ya mere, anyị na-anakwere àmà a kwere ya.
Kedu ihe ọ maara nke ọma karịa mmadụ niile? Ọ ma Chineke ma kpọọ Ya Nna. Ihe omimi a achotaghi echiche nke ndi ndu n'enweghi Mo Nso. Kraist biara site na Nna ya ma laghachikwute ya, o si n'elu igwe ridata ma rigo n'ebe ahu. Uwa nke di n'etiti Chineke na mmadu mechara mgbe ejiri Jisos mere anu aru nime Jisos, ma merie nkewa ahu Onye ebighi ebi adighi egwu, ma odi nso. N'ụzọ dị ịtụnanya, ndị mmadụ aghọtaghị ihe akaebe a maka eziokwu nke Chineke. Ha amagh ihe di iche n'etiti Onye nke Mmuo Nso na Nna ya n;n'ihi na ha jụrụ ikwere, ma ọ bụ ikwupụta mmehie ha. Ha enweghi ike ịhụ mkpa nke ịmalite ịmụ nwa, kama ha na-echefu onwe ha na-eche na ha dị mma ma nwee ọgụgụ isi. Ha kwesiri imata na inwe onwe ha enweghi ike ime ka ha ghuta idi n'otu nke Atọ n'Ime Otu.
EKPERE: Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ, anyị na - efe gị ofufe; n'eziokwu nke ịhụnanya gị, ị gbanweela anyị ma mee anyị ụmụ nke eziokwu gị. Ka eziokwu gị na Mmụọ gị kpuchie mba anyị, ka ọtụtụ ndị wee bụrụ ndị a zọpụtara, àmà nke Nna ahụ, Ọkpara na Mmụọ gbasaa n'ebe dị anya, ma bụrụ ndị doro anya n'asụsụ anyị, maka ọtụtụ ndị a ga-amụ ọzọ.
Gịnị bụ ihe ịrịba ama nke ịlọ ụwa ọzọ na ndị kwere ekwe?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:45 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)